Soomaaliya maxaa kala gudboon hadalkii Museveni? | Baydhabo Online
Waxaa jira dalal badan oo aan lahayn dowlad. Way jiraan, balse ma haystaan hay’ad nidaamsan oo maamusha, Soomaaliya waa mid ka mid ah. Waxaa jira dalal kale balse ma sheegayo sababo diblomaasi awgeed”. Ayuu yiri Madaxweynaha Uganda.
“Macnaha dhabta ah” ee hadalka Museveni